महङ्गा सेयरको न्यून प्रतिफल, चार हजार पाउन साढे ६ लाख लगानी - Tree Media News
tmednewsPosted on २५ भाद्र २०७५, सोमबार
विश्वविख्यात पेय पदार्थ उत्पादन गरिरहेको नेपाली कम्पनी बोटलर्स नेपालको दुबै कम्पनीहरुले सोमबार गत आर्थिक बर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई लाभांश प्रस्ताव गरेका छन् । बोटलर्स नेपाल तराइले ४० र बोटलर्स नेपालले २० प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव गरेका छन् ।
प्राथमिक सेयर धनीलाई कम्पनीको लाभांशले फाइदा हुने देखिए पनि दोस्रो बजारबाट उच्च मूल्य लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई भने महङ्गा कम्पनीको सेयरमा गरिने लगानी प्रतिफलको हिसाबले हात्तिको मुखमा जिरा हुने गरेको छ ।
सोमबार बोटलर्स नेपाल तराईको सेयरमूल्य प्रतिकित्ता ६ हजार ४५० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । यस आधारमा एक सय कित्ता सेयर किन्न लगानीकर्ताले कम्तिमा ६ लाख ४५ हजार रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कम्पनीले ४० प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव गरेअनुसार एक सय कित्ता सेयर किनेका लगानीकर्ताले कम्पनीको असोज १६ गते डाकेको साधारण सभाले पारित गरेपश्चात चार हजार रुपैयाँ मात्र नगद लाभांश प्राप्त गर्दछन। कम्पनीले अंकित मूल्यका आधारमा लाभांश वितरण गर्ने गर्दछ । लगानीकर्ताले दोस्रो बजारमा उच्च मूल्यमा सेयर किन्दा कम्पनीले प्रस्ताव गरेको लाभांश अनुपात ०.६२ प्रतिशतमा सीमित हुने देखिन्छ ।
बोटलर्स नेपाल बालाजुको अर्को उदाहरण हेरौं । उसको सेयरमूल्य प्रतिकित्ता एक हजार ६९३ रहेको छ । यस कम्पनीको सेयरमा एक सय कित्ता सेयरमा लगानी गर्न कम्तिमा एक लाख ७० हजार रुपैयाँ आवश्यक हुन्छ । यसरी किनेको सेयरमा उसले असोज १५ गतेको साधारण सभाबाट पारित भएपछि २० प्रतिशत अर्थात दुई हजार लाभांश प्राप्त गर्दछ ।
एक लाख ७० हजार लगानीमा दुई हजार लाभांश पाउनु भनेको १.१८ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । यसकारण सेयरमूल्य उच्च हुने कम्पनीले घोषणा गर्ने लाभांश लगानी गरिएको रकमको आधारमा सेयरधनीले ज्यादै न्यून मात्र पाउँछन् ।
यसले के देखाउँछ भने तपाई सेयर बजारमा लगानी गरेर राम्रो प्रतिफल खोज्नुहन्छ भने सस्तो सेयरमूल्य भएका कम्पनी नै छान्नु उपयुक्त हुन्छ । यसरी कम्पनी छनौट गर्दा केही कुरामा भने विशेष ख्याल पुर्याउनै पर्छ ।
लगानीका लागि कस्ता कम्पनी छान्ने त ? हेर्नुहाेस् एक दर्जन टिप्स
राम्रा कम्तिमा कम्पनीहरु छानेर सुरक्षित रुपमा दीर्घकालीन लगानी गर्नेहरु सेयर बजारमा कहिल्यै डुब्दैनन् । तर कम्पनीको सबै अवस्था विश्लेषण नगरि अरुको हल्लाको भरमा लगानी गर्ने भने सधै जोखिममा नै हुन्छन् । लगानीकर्ताले कम्पनी छान्दा निम्न कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ:-
१. विगत तीन बर्षको वित्तीय विवरण अध्ययन गर्दा खुद नाफा र प्रतिफल अर्थात बोनस सेयर वितरणको अवस्था क्रमश बढाउँदै लगेको कम्पनीहरु
२. कम्पनीको मुख्य कारोबार, व्यापार बढेको र अझै बढाउने पर्याप्त आधारहरु देखिएका कम्पनीहरु
३. कम्पनीको पूँजी आधार पर्याप्त रहेको, चुक्ता पूँजी बढेको तर त्यो भन्दा जगेडा कोष बलियो र लाभांश बाँड्न मिल्ने रकम धेरै रहेका कम्पनीहरु
४. चालु र आगामी आर्थिक बर्षहरुमा बढ्दो दरमा बोनस सेयर दिने क्षमता भएका कम्पनीहरु
५. विगतमा हकप्रदलाई भन्दा बोनस सेयरमा जोड दिएर भविष्यमा पनि राम्रो लाभांश दिने क्षमता भएका कम्पनीहरु
६. बजारमा धेरै सेयर भएको, सीमित ब्यक्ति र एउटा सानो समूहको हातमा मात्रै सेयर नरहेको कम्पनीहरु । सीमित समूहको हातमा सेयर रहेका कम्पनीमा आम सर्वसाधारण सधै डुब्ने खतरा हुन्छ ।
७. दोस्रो बजारमा सेयर मूल्य कुनै कारणले घट्यो भने पनि उसले जारी गर्ने बोनस तथा ननगद लाभांशले मूल्य खाम्ने अबस्था भएका कम्पनीहरु
८. पहिलेको बढाईमा मूल्य धेरै माथि पुगेर दोब्बर, तेब्बर तल आई अहिले भर्खर बढ्न थालेको र धेरै नउचालिएका कम्पनीहरु
९. आफैँ चुक्ता पूँजी पुर्याउन सक्षम रहेको र अरु संस्थासँग मर्जमा गएर सेयर बन्धक बन्ने अवस्था नभएका कम्पनीहरू
१०. कम्पनीको संस्थागत सुशासन सबल वा विगतमा बिग्रिए पनि विश्वसनीय रुपमा सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेका र जानसक्ने कम्पनीहरू
११. कम्पनीका सञ्चालक प्रतिष्ठित र स्वच्छ तथा कुशल व्यवस्थापनबाट सञ्चालित कम्पनीहरु
१२. जसको सेयर आईपिओ लागत मूल्यमै पाईने, प्रतिसेयर नेटवर्थ भन्दा कम सेयर मूल्य भएका र कम्पनीको सेयरको भाउ मूल्य आम्दानी अनुपात १५ गुणा भन्दा तल रहेका कम्पनीहरु आदी ।
दोस्रो बजार राम्रा कम्पनी र खराब दुबै कम्पनीको सेयरमूल्य तलमाथिको भैरहेको हुन्छ । सुरक्षित र दीर्घकालीन लगानी गर्नेहरुले सेयर बजार घटेर तललो बिन्दुमा आएको बेलामा नै सबल र राम्रा कम्पनीको सेयर मूल्य आईपिओको लागत मूल्यमै किन्ने हो । न कि महङ्गा कम्पनीमा लगानी गर्ने ।
सेयर बजारमा लगानी गर्नेहरु सबैले तब मात्र कमाउँछ जब उनीहरुले कम्पनीको र संस्थागत सुशासन, समग्र वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण गरेर लाभांशमा आधारित भई राम्रा कम्पनीको सस्ता सेयरहरुमा लगानी विविधिकरण गरेर लगानी गर्छन् । जो दीर्घकालसम्म जोखिम बहन गर्ने क्षमता राख्छन् । नेप्से कति बढ्छ भन्दा आफूले लगानी गरेको सेयरको भाऊ कति पुग्ला भन्ने हिसाब गरेर लगानी गर्ने सेयर बजारबाट मालामाल पनि हुन्छन् ।
Previous Postकीर्तिपुरमा दुई बालिकालाई बन्धक बनाएर बलात्कारPrevious Post
Next Postकाठमाडौँको ज्याथामा भिषण आगलागीNext Post